Kushambadzira Maitiro: Kukwira kweMumiriri uye Musiki Era | Martech Zone
2020 zvakanyatso shandura iro basa rezvenhau rinotamba muhupenyu hwevatengi. Yakave nzira yehupenyu kushamwari, mhuri uye vatinoshanda navo, foramu yezvematongerwo enyika kumisikidza uye nzvimbo yezviitiko zvenguva dzose uye zvakarongwa uye kuungana.
Shanduko idzo dzakaisa hwaro hwezviitiko zvinozogadzirisazve pasocial media kushambadzira pasi muna 2021 nekupfuura, uko kushandisa simba revamiriri vechiratidzo kuchakanganisa nguva nyowani yekushambadzira kwedigital. Verenga pamusoro pekunzwisisa nezvekuti ungatarise sei kune ava vanokoshesa-kukosha, vatsigiri, uye vateveri kuti vagadzire yechokwadi uye inokanganisa nzira yekutengesa yedhijitari yechako.
Trend 1: Yechokwadi Zvemukati Zvinorova Studio-Yakagadzirwa Zvemukati
Nepo pasocial media yave pakati pekushambadzira kwechiratidzo, zviri zvemukati zvirimo zviri pamucheto wekutungamira wekusvika kune vatengi, kunyanya kana zvichienzaniswa kushambadza.
KuGreenfly, taona kunyatsoita kwechokwadi -kutanga nzira inoshandura kune akasiyana maindasitiri nemapuratifomu. Biden yeMutungamiri Campaign timu yakawana mumayedzo avo emukati kuti echinyakare mashambadziro ezvematongerwo enyika - akagadzirwa zvine hunyanzvi, anotaridzika-masekondi 30-masekondi - anga asinganyanyo shanda kupfuura impromptu, kumashure-kwe-zviitiko vateereri kubva kuvhoti vachishandisa mafoni avo kana ma webcam kuti vagovane avo kufarira mukuvhota.
Democratic National Committee yakatendeukirawo kune avo vanobvumidza kuti vaburitse pachena nzira dzezvekudyidzana nedhijitari nezvegwara ravo rekuvhota ra2020, kusanganisira aimbova Mutungamiriri weUS uye munhu anofarira kuvhota Barack Obama nezvayo Ini ndichavhota kurwisa.
Vhoti yako haina kumbobvira yakoshesa kupfuura zvazvinoita izvozvi.
Nhasi izuva reNational Voter Registration Day. Enda ku https://t.co/XdZz4dh82T kunyoresa uye kuita chirongwa chekuvhota. Uye ita shuwa kuti munhu wese waunoziva anoita, futi. pic.twitter.com/ItarX1d4zw
Zvechokwadi zvemukati zvinoshanda zvakaringana padanho revatengi. Semuenzaniso, timu yezvemagariro kuhutano franchise Ndinoda Kickboxing ave achikwanisa kuzorodza uye kusiyanisa mhando yavo kuti vapindure nekukurumidza-kushanduka, yemusika musika COVID-19 mamiriro nekutora zvemukati zvinyorwa zvakanyorwa nepamusoro pezana revatungamiriri vavo vemunharaunda maStudio America. Uye SailGP vakabudirira kupinda mumakwikwi evatambi vechikwata pasirese kuti vagovane zvemukati zvakatorwa kubva kumakamera emuviri panguva yemakwikwi.
Tsamba yakagovaniswa naSailGP (@sailgp)
Maitiro 2: Fans Havasi Vateveri - Ivo Chikamu Chako Chikwata Chekugadzira
Fans vava kuita vagadziri vemhando yepamusoro (izwi rinodiwa nevamwe pamusoro inopisa) pachavo. Kunyange vamwe mushandisi-yakagadzirwa zvemukati zvinoramba zvichirongedzwa nemhando, hapana imwe nzira irinani yekusimudzira chigadzirwa pane kushevedzera pazviitiko zvechokwadi kubva kuvanhu chaivo.
Pakati pechirwere, pasina ticker-tepi parade nzwisiso, iyo Los Angeles Dodgers MLB World Series Championship yakadaidzira mhemberero chaiyo. Chikwata chedhijitari chekirabhu chakaunganidza vateveri vanopfuura mazana matatu nemazana mashanu kuti vaendese mavhidhiyo emakwikwi panguva yeGreenfly, iyo yavakanyora kuita midhiya yemagariro enhau.
Takapembera. Takachema. Takunda. #ZVO pamwe chete pic.twitter.com/U3nLivNz7K
Mushandirapamwe uyu wakabvumidza timu kuti ibvise nesimba rese remhinduro dzevapemburi vevateveri uye inosanganisira avo vanotsigira zvakanyanya mukukunda.
Maitiro 3: Yemagariro Midhiya Ndiyo Iyo Nyowani Arena Kukura Partner Kukosha
Nekuvharwa kwepasirese kwezviitiko zvakawanda zvehupenyu mu2020 uye kukwirwa kwataurwa pamusoro pesimba redhijitari pamiganhu, zvemagariro zvazove zvakakosha pakuratidzira mudiwa ROI nekubatsira kuzadza zvikwereti zvemari. Muchokwadi, pasocial media yave iri pakati penzira dzinonyanya kushandiswa dzekutengesa ku shandisa mari mumakore achangopfuura.
Vadyidzani vari kuramba vachikumbira humwe humbowo hwekudzoka pane yavo mari uyezve kuonekera mune iro bhizinesi ravo riri kubatsirwa nesocial media. Masangano ari kuwana kukosha uku mukutengesa kwakananga, kutungamira kutsva kwekutungamira, kuwedzeredza chiziviso cherudzi uye kusimudzira kwechigadzirwa chitsva.
Sezvakacherechedzwa munguva pfupi yadarika Sports Business Journal pani, Major League Baseball's mashanu-chikamu epakutanga akateedzana, Pakutanga NaPete Alonso, yakapihwa naGatorade, yakabatanidza mutambo wechinwiwa chemitambo kune vateveri ve baseball nenzira yakasikwa pane yeligi YouTube mugero.
Kukosha kwekutsigira kunogona kuwedzera kunyange kuwedzera kutyaira zvine mutsigo munzanga. Chikwata cheRajasthan Royals chekiriketi chakaparura mushandirapamwe neNIINE sanitary napkins muIndia, uko kune chaiko kushorwa kunoenderana nenguva. Munguva yemakwikwi eIPL achangoburwa, NIINE yakapa vasikana vapfumbamwe kupihwa kwemwedzi mitatu yemapeneti ehutsanana kumhanya kwese kwakahwinhwa, zvinokwana 186 kumhanya uye 1,674 vasikana.
Chinyorwa chakagovaniswa naNiine (@niineindia)
Kuvimbika, kutsigirwa kwechokwadi, uye zvinhu zvakasvibirira zvinogara zvichirova kumanikidzwa kwemashambadziro echiratidzo. Kukumbira zvemukati-zvinogadzirwa zvinobvumidza mabhenji kuti agadzire makwikwi ane simba anodimbura mushambadziro wekare. Ivo vanozomira pakati pevakwikwidzi vane hukuru hukuru kune vavakaroorana navo uye, mukudzoka, vanoona kukosha kwemagariro enhau mumari.
Tags: kushambadzaambassadorchaiyo contnetchokwadibarack obamabidenCOVID-19musikicricket timudemokrasi komiti yenyikadnczvibvumiranofan-inogadzirwa zvemukatiFansvateverigatoradegreenflyNdinoda kickboxingNdichavhotaInstagramLos Angeles vanodhiraivhabaseball hombe baseballkushambadzira maitiromlbninepakutanga naPete alonsoRajasthan madzimambosavihutsanana napkinsevanhu vezvenhausponsorshipsyemitambo bhizinesi jenariTwitteruser-generated contentYouTubeYouTube mugero
Tom Kuhr inyanzvi yekushambadzira manejimendi ine yakazara kumashure mukushambadzira kwedhijitari, mashandiro emari, uye vezvenhau. Iye murwi weakawanda akabudirira kutanga uye akabatsira kukwidza mari, kuvaka zvikwata zvepasirese, uye kugadzira maratidziro ekushambadzira uye epamusoro ekuvandudza mabhizinesi ayo akagonesa kukura nekukurumidza. Sezvo iyo CMO ye Greenfly, anoshanda padhuze nemitambo, midhiya, zvigadzirwa zvevatengi, uye mafranchise kuti aite uye kuyera mapurogiramu ane simba ekushambadzira. Kumiririra izwi remutengi, zvigadzirwa zvekuhwina mubairo zvaTom uye zvakasarudzika zviitiko zvevatengi zvakatungamira mukubudirira kwakawanda kubudikidza neIPO nekutora.